1. IVeki yeSayensi kaZwelonke (National Science Week (NSW)) sisiganeko sikazwelonke saminyaka le sokubhiyozela iSayensi, iThekhnoloji, uBunjineli, iMathematika neZinto eziNtsha ezinxulumene noko (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Innovation (STEMI)). IVeki yeMathematika kaZwelonke iyinxalenye yeVeki yeSayensi kaZwelonke, iphulo leSebe leSayensi neThekhnoloji (Department of Science and Technology (DST)). IVeki ye-NSW ilawulwa yi-South African Agency for Science and Technology Advancement (SAASTA)) eyiyunithi yezoshishino ye-National Research Foundation (NRF).
2. Ngethuba leVeki yeSayensi kaZwelonke (NSW), kuya kugxilwa ngokukodwa ekufundiseni iSayensi, iThekhnoloji, uBunjineli neMathematika (Science, Technology, Engineering and Mathematics education). Injongo yoku kukwenza ezi zifundo zibe nomtsalane ngakumbi kubafundi, yaye zibe zizifundo abazithandayo nezityebisa ulwazi lwabo nolwabahlali ngokubanzi. Izikolo zinokuqaqambisa igalelo leSayensi, iThekhnoloji, uBunjineli neMathematika kubomi bethu bemihla ngemihla yaye zikugxininise ukubaluleka kwezi zifundo njengesiseko samakhondo emisebenzi amaninzi. IVeki yeNSW isisixhobo sokwazisa ngezi zifundo nesokwandisa ulwazi lukawonke-wonke lokuziqonda kakuhle nokuzixabisa ezi zifundo ngokunjalo. Umxholo we-NSW 2017 uthi: Advancing Science Tourism.
3. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) licela zonke izikolo ukuba zenze imisebenzi ekhethekileyo esekelwe kwezi zifundo ngethuba leveki yeNSW. Eyona nto inqwenelekayo kukuba kuthathwe inxaxheba ngabafundi nangabazali babo. Oku kukugxininisa ukuba mababe nolwazi ngeSayensi, iThekhnoloji, uBunjineli neMathematika kubomi bemihla ngemihla, yaye bakonwabele ukuzifunda ezi zifundo ngokuthatha inxaxheba nangokusebenzisana.
4. Le mibutho ingekho phantsi kukarhulumente (NGOs) ilandelayo, ingaBaququzeleli beGranti (Grant Holders) abafumana inkxaso-mali kwi-SAASTA ukulungiselela ukuqhuba iiprojekthi ezichaphazela iSayensi, iThekhnoloji, uBunjineli neMathematika ngethuba lale Veki yeNSW. Iziko lewebhu leSebe iWCED liya kubonelela ngeprogram yemisebenzi yeSayensi eya kwenziwa eNtshona Koloni: http://www.wcedcurriculum.westerncape.gov.za
ABaququzeleIi beGranti ii-Western Cape SAASTA Grant holders
Umbutho Umntu ekuqhagamshelwana naye
Inombolo yefoni yase-ofisini:
Nks Jacque Willems
Nks Lekgabe Dihlabi
Nks Busi Maqubela
Nks Luchricia Sidukwana
Mnu Ambrose Yaga
Mnu Hilton Tobias
Nks Kristen Hoek
Mnu Sivuyile Manxoyi
Nks Buzani Khumalo
Nks Elisa Fraser
ISebe iWCED, lisebenzisana ne-Cape Town Science Centre (CTSC), ukususela nge-14 Agasti 2017, liya kumisela ukhuphiswano olubizwa i-Mathematics, Science and Technology (MST) Quest competition olubandakanya izikolo eziyi-30 ezizii-MST Focus Schools ezikwiZithili zeeDolophu (Metropoles) nolwandisa imisebenzi ye-NSW. Ukhuphiswano lokugqibela lokukhetha abagqwesileyo luya kuqhubeka ngoLwesine we-07 Septemba 2017. Olu khuphiswano luyinxalenye yephulo lokunxulumanisa ikharityhulam yesayensi nemisebenzi yolonwabo nokukhuthaza abafundi beBakala 9 bezikolo ii-MST Focus schools, baqhubeke ukufunda isayensi. Isikolo sakho siya kufumana isimemo sokuthatha inxaxheba kumsebenzi wolonwabo wokwenza izifundo ze-MST zibe nomtsalane onokubangela ukuba abafundi bafumane ulwazi olubaxhobisa ngakumbi kwezi zifundo.
5. ISebe iWCED lingathanda ukunika izikolo amathuba okwabelana namanye amagosa nezinye izikolo ngemisebenzi yazo kwiphondo. Ziyakhuthazwa kwakhona izikolo ukuba ziwabandakanye amagosa ezithili yaye zithathe iifoto nee-video clips ukwenzela ukuba xa kunokwenzeka, zipapashwe kwiziko lewebhu leSebe iWCED. Ezi zinto zinokunikwa abacebisi bezifundo ukuba bazifake kwiziko lewebhu. Zinokuthathelwa ingqalelo nezinye iindidi zemidiya ezifana ne-Facebook no-YouTube.
6. ISebe iWCED liyawathakazelela amalinge angamanye ootitshala bethu okongeza ulonwabo ekufundweni nasekufundisweni kweSayensi, iThekhnoloji, uBunjineli neMathematika.